कुकुरले मालिकलाई गोली हान्यो
&nbsp;३० वैशाख &ndash; अमेरिकाको आयोवामा ५१ वर्षीय एक व्यक्तिको कुकुरले उनलाई गोलीप्रहार गरेपछि उनी अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छ । गोलीप्रहारका कारण उनी घाइते भएका थिए । स्थानीय समाचारहरूका अनुसार, एक व्यक्तिले इमर्जेन्सी नम्बरमा डायल
प्रकाशित मितिः बैशाख	31, 2075
नेपालबाट भारतमा मानव खप्परकाे तस्करी !
झापा । नेपालको पूर्वी नाकाबाट मानव खप्पर तस्कर गर्ने गिरोह सकृय रहेका छ । तर,मानव खप्पर तस्कर गर्ने गिरोहलाई के कारवाही गर्ने भन्ने बिषयमा नेपालमा कानुन नभएका कारण यसका तस्करहरूले मुक्ति पाईरहेका छन् ।मानव खप्पर भन्ने शब्द जत�
प्रकाशित मितिः बैशाख	25, 2075
अर्चना पनेरुले दरबारमार्गमा नयाँ धन्दा गरेकाे खुलासा
काठमाडौं । कुनैबेला पोर्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भन्दै निकै अश्लिल तस्विर खिचाएर चर्चामा आएकी अर्चना पनेरु यतिबेला गुमनाम जस्तै छिन् । अश्लिलताका कारण क्षणिक चर्चा कमाएपनि अश्लिलताकै भरमा लामो समय टिक्न नसकेपछि उनी हाल गुम�
प्रकाशित मितिः बैशाख	19, 2075
अनौठो घटना: पुरुष भेष बदलेर युवकसँगै बिहे !
युवक र युवतीबीच विवाह हुनु सामान्य कुरा हो । तर, युवकले युवतीको भेष बदलेर युवकसँगै विवाह गरेको घटनालाई भने सामान्य रुपमा लिन सकिन्न ।राजधानी दैनिकका अनुसार, धनकुटा जिल्लाको सहिदभूमि गाउँपालिकास्थित छिन्ताङमा यस्तै खालको असा�
बिबाहपछि अक्सर महिलाहरु मोटाउछन्, कारण यस्तो छ !
बिबाहपछि अक्सर महिलाहरु मोटाउछन् । किन ? यसका एउटा मात्र कारण छैन । सामान्त बिबाहअघि युवतीहरुले आफ्नो फिगरमा बढी ख्याल गर्छन् । उनीहरु स्लिम देखिन रुचाउँछन् । राम्री देखिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि उनीहरु फिगर मेन्टेन गरिरहे
पशुपन्छी बिच देखिएको यो सुन्दर प्रेम ! हेर्नुहोस यी ५ तस्बिरमा !!
पशुपन्छी बिच देखिएको यो सुन्दर प्रेम ! हेर्नुहोस यी ५ तस्बिरमा&nbsp; !! from caters news ageney
प्रकाशित मितिः बैशाख	14, 2075
ठेक्का पाउन मन्त्रिसँग ‘सेक्स’
एक महिला जस्ले आफ्नो कामुकता देखाएर करोडौको टेण्डर हात पर्छिन । उनले आफै के खुलासा गरेकी छिन् भने टेण्डर हात पार्न मन्त्रि देखी सेक्युरिटीसँग पनि सेक्स गरेकी छिन त्यो पनि एकै दिन । हेर्दा निकै कामुक देखिने ति महिलाले यस्तै कार�
सेक्समा चरमसुख प्राप्त गर्ने चार तरिका
सेक्सका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुदाहुदै सेक्स यो हो भनेर जानकारी दिनेहो भने त झन तनावै होला । यसको मतलव सेक्स भन्ने कुरावाट सवै परिचीत छन । मानिस मात्रै होईन जिवन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो । अव कुरा गरौं
एजेन्सी- हिन्दू धर्ममा कैयांै प्रकारका धार्मिक तौरतरिका छन्, जसको हाम्रो जीवनमा गहिरो महत्व छ। कतिपय यस्ता कार्यका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छन् । प्राचीन परम्पराहरु हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन बनाइएको पाइन्छ । यस्तै एक परम
प्रकाशित मितिः बैशाख	10, 2075
खानेपानीको व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाऔं
धरानमा फागुन, चैत्र, वैशाख तथा जेष्ठ महिनाको अन्त्यसम्म खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ । असारको पहिलो सातादेखि पानीको समस्या विस्तारै हल हुदै जाने गर्दछ । आजभोलि विहान सडकका किनारामा घैला, वाल्टी लाईनमा हुन्छन् । छरछिमेकीका �
प्रकाशित मितिः चैत्र 21, 2074
पूर्व राजकुमारी पूर्णिकाले रोजिन् प्रेमी: डेटिङमा आमा हिमानीको साथ को हुन् उनी?